HERO OF MYANMAR: မြန်မာအတိုက်အခံများထဲတွင် စိတ်ဖောက်ပြန်သူများစွာ ရှိနေကြောင်း ထူးထူးဟန်မှ သက်သေပြ
[2:36 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
ဒီနေ့မြန်မာအတိုက်အခံတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးက နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဆိုးသတင်းတွေကို BBC, VOA, DVB, RFA တို့က နားထောင်လိုက် ဧရာဝတီ၊ မဇ္ဈိမ နဲ့ တခြား အလကားရတိုင်း စွတ်ရေးနေကြတဲ့ ဘလော့ပေါင်းများစွာက ဖတ်လိုက်နဲ့ တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် အကုသိုလ်တွေများကာ စိတ်တွေ ကျဆင်းလျှက် ရှိနေပါတယ်။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုဆိုရင် ဘယ်လို ဆန့်ကျင်ရမလဲ ဆိုတဲ့ ကန်လန့်အတွေးမျိုးတွေကိုပဲ တွေးနေတတ်ပါတော့တယ်။ ကိုယ့်ဖက်ကနိုင်ဖို့ဆိုရင် မဟုတ်တာတွေရော ဟုတ်တာတွေရော ကယောင်ကတမ်းနဲ့ သိမ်းကျုံးပြောနေတဲ့ အတိုက်အခံတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ သေချာတာကတော့ အဲဒီ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား ဆိုသူတွေအားလုံးရဲ့ စိတ်တွေက ပုံမှန်မဟုတ်တော့ပါဘူး
ရွေးကောက်ပွဲကလည်းပြီး၊ ပြန်လုပ်လို့ကလည်းမရ၊ အခြေခံဥပဒေကလည်း အတည်ဖြစ်နေ၊ ပါတီပေါင်းကလည်း များတဲ့အပင်၊ အားကိုးနေကြတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ထင်သလောက် ဖြစ်မလာတော့ သတင်းဌာနတွေလည်း သတင်းပျက်လို့ ဒီဗွီဘီ တို့ကလည်း ဟာသ ဇတ်လမ်းတွေရိုက်လို့ရိုက်၊ ဧရာဝတီဘလော့ကလည်း ပေါတောတော ဟာသတွေပဲ တင်လို့တင် ဖြစ်နေကြရပါတယ်။
သတင်းပြတ်လပ်နေသူတွေနဲ့ သူရေဲကောင်းအလိုရှိနေတဲ့ အတိုက်အခံလောကထဲက လူဗြိန်းတွေအပေါ်မှာ ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက် သွားနိုင်သူကတော့ ထူးထူးဟန် ဆိုတဲ့ ယနေ့မြန်မာသတင်းလောကမှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပြီး အားလုံးက သူရဲကောင်းကြီးအဖြစ် အထင်ကြီးလေးစားခြင်း ခံနေရသူဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်က ထူးထူးဟန်ဆိုတဲ့အတိုင်း အင်မတန်ထူးခြားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးတာများလို့ပဲ ရူးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုချိန်မှာတော့ အရူးက တမူးသာ သွားတာကို အားလုံးအငိုက်မိ ခံလိုက်ရပါတယ်။
ထူးထူးဟန် (ယခင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ယခု ဒုက္ခသည်၊ အော်ဇီ) ။ ။ "ကျွန်တော် လူသတ်သမားပါ" ဆန္ဒပြသူ ၂၄ ဦးထက်မနည်း ကိုယ်တိုင် ပစ်သတ်ခဲ့ပြီး ၁ဝဝ ကျော် သတ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ ( ကျောင်းဆင်းစ စစ်ဗိုလ်က အဲ့လောက်တောင် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရှိခဲ့တာလား။ ဗိုလ်ထူးထူးဟန်တောင် ဒီလောက် သတ်လာရင်၊ ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထဋ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ၁၀၀ ကျော် သတ်ခဲ့မှာပဲ။ ICC ကို အတူသွားဖို့သာ ပြင်ပေတော့ )
"တနေ့ကို ၄ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ရတယ်၊ ၃ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ရတယ်။ ဦးနှောက် မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မရဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ အရမ်းရှုတ်ထွေးနေတဲ့ အချိန်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာလည်း ကျနော်က အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး’’ (ဂေါက်ရတဲ့အကြောင်းထဲမှာ အဲ့ဒါလည်း ပါမယ်)
"ကျနော် အသက် ၂၂ နှစ်မှာ ၉ တန်းကျော်ငးသားအနေနဲ့ ကျောင်းသားထုထဲဝင်လာတာပေါ့ ( ၂၂ နှစ်နဲ့ ၉ တန်း လို့ လိမ်ဝင်ခဲ့တာတဲ့၊ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ကျောင်းသားတွေ အခုမှ အ တာမှတ်နေတာ အဲဒီတုန်းကကတည်းက သူများအညာခံနေရတာကိုး)
"DSA ၂ နှစ်တက်ခဲ့တယ်၊ ရွှေဓား လည်း ရခဲ့တယ် ( ထူးထူးဟန် ၁၈ နှစ် တုန်းက ၁၉၈၅ ခုနှစ်ပါ။ အဲဒီတုန်းက DSA က သက်တမ်း ၄ နှစ် တောင်တက်ရတယ်။ DSA ကို ၂ နှစ် တက်ပြီး အရာရှိဖြစ်တာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ထူးထူးဟန် တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ ဒီထက်ဆိုးတာက ရွှေဓား ရခဲ့တယ်တဲ့။ သူ့ဘကြီးက ပန်းတိမ်ဆရာမို့နေမှာ။ DSA မှာ အမှတ်စဉ် ၁ ကတည်းက ငွေဓားပဲ ပေးလာတာ သူ့ကျမှ ရွှေဓားတဲ့။ တွေ့ရင် ခဏလောက် ငှားကြည့်ချင်တယ်ဗျာ၊ အဆိုးဆုံးကတော့ ကျောင်းဆင်းတာနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးသင်တန်းတောင် မတက်ရပဲ ထောက်လှမ်းရေးရာက်တယ်တဲ့။ ယုံလိုက်ကြအုံးပေါ့ လူဗြိန်းများ)
"DSA မှာ ဘယ်ကျောင်းတက်ခဲ့ရလဲဆိုတာ ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော့်မှာ ဒီမှာ ရဲဘော်တွေ တချို့မိဘတွေက ဗမာပြည်မှာ ရှိနေတယ်။ သင်တန်းက နံပတ်စဉ်တွေ ပြောချလိုက်ရင် အကုန်လုံး ရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့ ( DSA က ဘယ်ကျောင်းတက်ရလဲ ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့၊ ကျနော့်နာမည် ထူးထူးဟန် ပြောလို့မဖြစ်ဘူး လို့ဖြစ်နေတယ်။ DSA တက်တုန်းက ငွေဓါး (အဲလေ) ရွှေဓားတောင် ရထားပြီး ၂ နှစ်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေး ပို့ခံရအောင် ထူးချွန်နေတာပဲ အဲဒီတုန်းက ဘာမှမဟုတ်တာမှ မလုပ်ခဲ့တာ အမှတ်စဉ်တော့ ပြောနိုင်သင့်တာပေါ့၊ အောင်လင်းထွဋ်တောင် ပြောနိုင်သေးတာပဲ၊ မဟုတ်မှလွဲရော အမှတ်စဉ်ကို ကြိုတွက်မထားဘူးထင်တယ်။ )
"ကျနော့်ကို ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ ထည့်ပေးတယ်။ ကျနော်က အဲဒီ ၂၀၀၀၀ စလုံးကို တပတ်အတွင်းမှာ သုံးပစ်လိုက်တယ်။ ကျနော့်ကို နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုနဲ့ သေဒဏ်ချနိုင်တယ်” အဲလိုမျိုး ခြိမ်းခြောက်လာတယ် (ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ တစ်ပတ်အတွင်း သုံးတာနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးက နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုနဲ့သေဒဏ်ချမယ်တဲ့။ မဟုတ်မှလွဲရော အဲဒီခေတ်ကတည်းက ဒေါ်လာ ၂ သောင်းကို တစ်ပတ်နဲ့ သုံးခဲ့တယ် ကွ လို့များ လူသိစေချင်တာလား။ )
"ကျနော်က ထောင်ထဲမှာ အရိုက်ခံရတာကိုး။ ကျနော် MI6မှာ လုပ်နေတာကို ထောင်က အရာရှိတွေကို ပေးမသိဘူး။ ပေးမသိတော့ ကျနော့်ကို ကျောင်းသားပဲ ထင်တာပေါ့။ (စုံထောက်က ဘယ်သူမှမသိအောင် သူလျှိုလုပ်ပြီး ထောင်ကျ အရိုက်ခံရတယ် ဆိုတာ ဇတ်ကားထဲမှာပဲ ရှိတယ်။ အော်ဇီရောက်မှ စုံထောက်ကားတွေ ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ် ဇတ်လမ်းဆင်နေတယ်ထင်တယ်)
"ကျနော်အပါအဝင် ၉ ယောက်ပေါ့နော်။ တခြားသူတွေ့က စီးပွားရေးအရ အရမ်းအောင်မြင်နေကြပြီ၊ အိမ်တွေ၊ ကားတွေနဲ့။ (အော်... တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသူရဲကောင်းကြီးတွေက သူများနိုင်ငံမှာ ကောင်းစားနေကြတာပါလား)
"တယောက်ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး စွဲနေပြီး၊ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ပေါ့။ သူလည်း လုပ်ခဲ့တာတွေ၊ ဒီမတရား လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ၊ ကျနော့်လိုပေါ့။ စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်တယ်ပေါ့ (မူးယစ်ဆေးတောင် စွဲနေလိုက်သေး။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း စိတ်ကျရောဂါသည်၊ အပေါင်းအသင်းတွေကလည်း စိတ်ကျသူတွေနဲ့ မူးရစ်ဆေးစွဲသူတွေ။ ဒီလူတွေနဲ့မှ ဒို့နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီမရရင် နောင် ဘယ်လွယ်လိမ့်)
" အိုးဝေအောင်တို့၊ ရဲတေဇတို့ဘာတို့ အခုအမေရိကမှာ ရှိပါတယ် ဒီကောင်တွေ။ ကျနော်နဲ့ အတူလုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်တွေ (အိုးဝေအောင်က ထူးထူးဟန်ကို မသိဘူးတဲ့)
"ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက်က ICC ကို ရောက်ချင်တယ် ( ICC တော့ မမြင်ဘူး၊ အရူးထောင်နဲ့တော့ နိးနေပြီ)
"ကျနော်က ပန်းချီဆရာအလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ ဆုတွေရတယ်။ မနှစ်က တသောင်းဆု ရတယ်လေ။ ကျနော့်ပန်းချီကားတွေက ဈေးအရမ်းကြီးတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံလူ မဝယ်နိုင်ဘူး။ ကျနော့်ဟာ ကျနော် ဆွဲတယ်။ စိတ်ပြေလက်ပျောက် လုပ်တယ်။ (စိတ်ပြေလက်ပျောက်နဲ့ တော်ရုံလူမဝယ်နိုင်တဲ့ ဆုရပန်းချီကားတွေ ဆွဲနိုင်တဲ့ လူပါလား၊ တစ်ပတ်အတွင်း ဒေါ်လာ ၂ သောင်းသုံးခဲ့တယ် ပြောတုန်းက ကြွားလှပြီထင်နေတာ။ ခုမှ ပိုဆိုးနေ)
" ခုထက်ထိပေါ့ ဆက်လက် ဆေးကုသမှု ခံယူနေဆဲပဲ (ဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင် တစ်သက်လုံးကုရလိမ့်မယ်)
ဘုန်းကျော် (ယခု ဒုက္ခသည် အော်ဇီ) ။ ။ကိုထူးထူးဟန်ကို သံသယနဲ့ ရေးလာပြောတာကိုကြည့်ပြီး တခါတလေ အဲဒိလိုသံသယမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေဟာ ခေါင်းမရှိသလိုပဲ။ ဒီကိစ္စက အမှုသေးသေးလေးမဟုတ်ဘူး။ အနည်းဆုံးထောင်ကျနိုင်တယ်။ ဂေါက်ပြီးပြောရင်တောင် စစ်လားဆေးလားမြန်းလားနဲ့ ဘယ်လောက်အလုပ်ရှုပ်တယ်မှတ်လဲ။ ကျနော်သာဆိုရင် ဘာဘီကျူနဲ့ဘီယာပဲ ဇိမ်ခံပြီးသောက်တော့မယ်။ ဒီလိုပေါက်ကရကို ဘယ်တော့မှမပြောပါ။
စိုးမြင့်အောင် soemyintaung08@gmail.com (ယခင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ယခု ဒုက္ခသည်၊ အော်ဇီ) ။ ။ "ထူးထူးဟန်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော်သိသမျှလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ ၁၉၈၇မှာကျနော်တို့ တရပ်ကွက်ထဲ အတူနေခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်က ထူးထူးဟန်ညီနဲ့ကျနော်နဲ့က ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းပါ။ကျနော်က ၈တန်းကျောင်းသားပါ။ထူးထူးဟန်တို့အိမ်က ကျနော့်အတွက် စားအိမ်သောက်အိမ်ပါ။
ထူးထူးဟန်အဖေက ကားပွဲစားလုပ်ပါတယ်။ထူးထူးဟန်ကလည်း သူ့အဖေနဲ့အတူ ကားပွဲစား လုပ်ပါတယ်။
၈လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးမှာ တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် လူငယ် တွေအဖြစ် ...ထူးထူးဟန်ရော...ကျနော်ပါ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ထူးထူးဟန်က သုံးရောင်ခြယ်အဖွဲ့မှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားကြောင်း ကျနော်သိရပါတယ်။
ကျနော်က တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် သပိတ်တပ်ပေါင်းစုမှာ သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေး လုပ် ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၈၈၈၈ပြီးနောက်ပိုင်း ... စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် -န၀တက စစ်အာဏာသိမ်းတော့ ထူးထူးဟန် တောခိုသွားပါတယ်။
၈၈နိုဝင်ဘာလမှာ န၀တက ထိုင်းနယ်စပ်မှာ ကြိုဆိုရေးစခန်း ဖွင့်တော့ ထူးထူးဟန် ပြန်လာပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊တပ်ခ်ခရိုင်လေဆိပ်ကနေ-ရန်ကုန်၊မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်အထိ၊ န၀တက လေယာဉ်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အခါ-ထူးထူးဟန် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၉ ခုနှစ် ၈လပိုင်း ရှစ်လေးလုံး၁နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အကြိုအတွက် ...စာဝေခြင်း၊ပြောက်ကျားဆန္ဒပြခြင်းများကို တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်မှာ ကျနော်တို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် ထူးထူးဟန်ရော...ကျနော်ရော...စစ်ထောက်လှမ်းရေးရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ထူးထူးဟန် ရပ်တည်ချက်ကို ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ ထူးထူးဟန်ကို အိမ်မှာ လာဖမ်းဆီးချိန်မှာ ထူးထူးဟန် အဖမ်းမခံရပါဘူး။ သူ့အဖေကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးက ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ သားဖြစ်သူ ထူးထူးဟန်ကို မိမှပြန်လွှတ်ပေးမယ်...ဆိုလို့ ထူးထူးဟန် အဖမ်းခံခဲ့ပါတယ်။တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် အားကစားကွင်း(စစ်ကြောရေးစခန်း)မှာ ထူးထူးဟန်ကို စစ်ကြောရေး ၀င်ပါတယ်။စစ်ကြောရေးမှူးက မ.၀.တ ဗိုလ်မူးမောင်စိန်ပါ။”ဘယ်သူတွေ ပါသေးလဲ...”လို့ ရိုက်နှက်မေးမြန်းခြင်းကို ထူးထူးဟန်၂ရက်ကြာ တောင့်ခံခဲ့ပါတယ်။
ကျနော့်ကို လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက ဖမ်းဆီးပြီး အားကစားကွင်းဆီခေါ်သွားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးမောင်စိန်က ”ထူးထူးဟန်ကို ထုတ်ခဲ့”လို့ အမိန့်ပေးချိန်မှာ ထူးထူးဟန်ကို ဆွဲခေါ်လာကြပါတယ်။မတ်တပ်တောင် မရပ်နိုင် တော့ပါဘူး။သွေးတွေမြင်မကောင်းအောင် ပေကျံနေပြီး တကိုယ်လုံး ဖူးယောင်နေပါတယ်။
”မင်းပြောတဲ့ ကုလားလေးလား”လို့ ဗိုလ်မှုးမောင်စိန်မေးတဲ့အချိန်မှာ ထူးထူးဟန်က ကျနော့်ကိုမော့ကြည့်ပြီးဖြေးညှင်းစွာခေါင်းခါပြပါတယ်။ သူ့မျက်လုံးကို ကျနော်သဘောပေါက်တယ်။ ကျနော့်ကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နေ့လည်ဘက်မှာပါ။
ည၁၁နာရီမှာ ကျနော့်ကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးက လာဖမ်းပါတယ်။ထူးထူးဟန်နဲ့ကျနော်... ရုံးချိန်းအချုပ်ခန်းတွေမှာ..စစ်ခုံရုံးမှာ... ၊ထောင်ထဲမှာပါ အတူနေခဲ့ရပါတယ်။ ။ထောင်တွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြတ်သန်းစဉ်မှာလည်း ကျနော်တို့နဲ့အတူပါတယ်။သွေးထွက်၊ချေးထွက်အောင် အရိုက်ခံရတော့လည်း ထူးထူးဟန်ပါ အရိုက်ခံရတယ်။
အဲဒီ့နောက် လွတ်ရက်စေ့လို့ပြန်လွတ်တော့..၁၉၉၂မှာ လွတ်တယ်။ ထူးထူးဟန်ထောင်က လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာ ချောင်းဆိုးရင်သွေးတောင်ပါတယ်။
ထောင်တွင်းမှာ ရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေပါ။ လွတ်မြောက်ပြီး မကြာခင်မှာပြည်ပကို ထူးထူးဟန် ထွက်သွားပါတယ်။ ကျနော်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာ ယနေ့အချိန်ထိပါ။
တကယ်တမ်းပြောရရင် လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ထူးထူးဟန်ပြောစကားတွေက (မီဒီယာများတွင် သူသည်စစ်ထောက်လှမ်းရေးဘ၀က လူများသတ်ခဲ့သည်ဟု ထုတ်ပြောသော စကားတွေက) ကျနော်နဲ့ထိစပ်ခဲ့သမျှတွေနဲ့ လုံးဝ ကွာခြားနေပါတယ်။ သူပြောနေတာတွေက ဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါးတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
အိုးဝေအောင် oway88@gmail.com (ယခင်နိုင်ငံရေးသမား ယခုဒုက္ခသည်၊ အမေရိက) ။ ။ "ထူးထူးဟန် ပြောတဲ့ တခြားအကြောင်းအရာတွေထဲမှာ မှန်တာ မှားတာတွေ ဘာမှ မပြောချင်ပေမယ့် ..www.mizzima.comမှာ http://www.mizzimaburmese.com/interview /7992-2011-07-21-10-23-13.html ထူးထူးဟန် အင်တာဗျူးထဲမှာပါလာတဲ့ ”အကသ ”ကိစ္စတွေ ပြောရင်တော့ ...သူ မဟုတ်တာ မမှန်တာ ပြောနေတယ်ဆိုတာ ဖြေရှင်းရပါလိမ့်မယ်။
သတင်းများအရ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်း ထူးထူးဟန်သည် ၁၉၈၇ တွင် ဒီအက်အေ ကျောင်းဆင်းကာရွှေဒါးဆုရထားသူဟုဆိုသည်၊ (၁၉၈၇ ကျောင်းဆင်းသည် အပတ်စဉ် ၂၉ ခန့်ဖြစ်မည်၊) ကျောင်းဆင်းဆင်းချင်း ဒုဗိုလ် ဘ၀ဖြင့် ထောက်လှမ်းရေး(၆)တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကာ ကျောင်းသားအဖွဲ့တွင် ရွှေထီးဆိုသောနာမည်ဖြင့် လှုပ်ရှားခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်၊ ပြီးနောက်ဆန္ဒပြသူများအား နောက်စိကို သေနတ်ဖြင့်ပြစ်သတ်ကာ မီးရှို့ပြီး သာကေတတံတားဟောင်းမှ ငမိုးရိပ်ချောင်းထဲသို့စွန့်ပြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်၊ ပြီးနောက် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်စာရွက်စာတမ်းဖြန့်ဝေ မှု့ဖြင့် ထောင်သုံးနှစ်ကျကာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်ထောင်မှလွတ်သည်ဟုဆိုသည်။
ထိုသတင်းအားသုံးသပ်ကြည့်ရလျှင် ဒီလောက်ထဲထဲဝင်ဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ တယောက်က ၈၉ခုနှစ်မှာစာရွက်စာတမ်းဖြန့်ဝေမှု့ဖြင့် ထောင်၃နှစ် ဘာလို့ကျရတာလဲ၊ (တချို့သတင်းလိုချင်လို့ထောင်ကျခံပြီးဝင်တဲ့သူလဲရှိပါတယ်၊) ဒါပေမယ့်သူက တကယ်ထောင်ကျလို့သာ အခု သြစတြေးလျမှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နဲ့နေ နေတာပါ၊ တကယ့်ထောက်လှမ်းရေးတွေ ၈၈တုန်းကထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်တဲ့သူတွေ န.၀.တ၊ န.အ.ဖ လက်ထက်မှာကောင်းစားနေကြတာအားလုံးအသိပဲ၊( ဥပမာ.ဖိုးကံကောင်း၊ ဗိုလ်ကြီးစည်သူ၊ အရေးအခင်းမှာပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ တပ်မ၂၂ တပ်မမှူး ဗခတင်လှတို့) သူ့ကျမှဘာလို့ထောင်ကျရတာလဲ၊ နောက်ပြီး ဘီဘီစီက အမေးမှာ ဘာလို့ဒီအချိန် နှစ်၂၀ကြာမှဖော်ထုတ်ရလဲဆိုတော့ အီး၊ အဲ နဲ့ဖြစ်နေတယ်၊ နောက်သူ့အပြောအရ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တယောက်၊ ဒီဘက်မှာ အော်ဖစ်ဆာကြီးတယောက်တဲ့၊ တျောင်းဆင်းကာစ တပွင့်နဲ့ဗိုလ်လေးတယောက်ကို ဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့တာဝန်တွေပေးပါ့မလား၊ (ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ၊ ဒီလူသည် D.S.A 29 မှာရွှေဒါးဆုရခဲ့ပြီး လှမ်း၆တွင် တာဝန်ထမ်း ဘူးသူဟုတ်မဟုတ် ကွန်ဖန်းလုပ်ကြည့်ပေးပါ၊) သူနဲ့ထောင်အတူကျဖူးသူရဲ့အပြောအရတော့ စိတ်ဖိစီးမှု့တွေများနေတယ်လို့ ယဉ်ယဉ်လေးပြောထားတယ်။
အမည်မဖော်ဝံ့သူ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား သူရဲကောင်းတစ်ဦး ။ ။ "ကျနော်က ထူးထူးဟန် (၀ါတီး) ဆိုတာကို သူမိသားစု တစ်စုလုံးပါ သိတဲ့သူပါ။ ထူးထူးဟန်ဆိုတာ ဘာထောက်လှမ်းရေးမှ မဟုတ်ဘူး။ ၁၉၆၇ ကလဲမွေးတာမဟုတ်ဘူး။ တောင်ဥက္ကလာပ ၁၀ ရပ်ကွက် ဇေယျလမ်းမှာနေတယ်။ စစ်တက္ကသိုလ် နာမည်ဆိုတာတော့ ကြားဖူးပါလိမ့်မယ် ရောက်ဖို. တက်ဖို.ဆိုတာကတော့ အိပ်မက်တောင်မက်ခဲ့ဖူးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပညာအရည်အချင်းက ၆ တန်းလား ၇ တန်းလား မသိဘူး ဒါထက်မမြင့်ဘူး။ ၁၉၈၈ မှာ အသက်က ၁၅ နှစ်လောက်ပဲရှိ်သေးတယ်။ ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယေါင်လုပ်တာတော့ ၀ါသနာပါတယ်။ နာမည်ကြီးချင်တယ်။ သူမိသားစုအကြောင်း အကုန်သိတယ်။ သူ.အကိုက ဆန်နီဟန်(တီးတော့) မြန်မာပြည်မှာတုံးက RIT မှာ တက်ခဲ့တယ်။ ၈၈ တုန်းက တောခိုခဲ့တယ်။ ဘုရားသုံးဆူဖက်ကို ရောက်လာဖူးတယ် ကြားတယ်။ ဆန်နီဟန်ကို ကိုနေမျိုး (ABSDF) ရဲဘော်ဟောင်းကြီး သိပါတယ်၊ တလ ၂ လလောက်ပဲ ရှိမယ် သိပ်မကြာဘူး ပျောက်သွားတယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်သွားပြီး နောက်တော့ ဘန်ကေါက်ပြန်တက်လာပြီး UNHCR ဒုက္ခသည်အနေနဲ. အမေရိကားကို ရောက်လာပြီး အခု Buffalo, New York ဖက်မှာ ရှိတယ်လို.တော့ ကြားမိတယ်။ သူ.ညီက ထက်ထက်ဟန်(ပဲပြုတ်) အခု Australia မှာပဲနေနေပါတယ်။ ထူးထူးဟန်က ၈၈ မှာတောခိုခဲ့သေးတယ် သေ့ဘောဘိုးစခန်းကို ရောက်တယ်။ ၂ ပတ်လောက်နေတော့ ငှက်ပျောအူ မစားနိုင်တော့ ပြန်လစ်သွားတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အကသ အဖွဲ.၀င်အနေနဲ. ဟိုစာဝေ ဒီစာဖြန်.လုပ်ပြီး ထောင်ကျခဲ့တယ်တော့ ကြားမိတယ်။ နောက်တော့ထွက်လာပြီး ဘန်ကေါက်မှာ ဒုက္ခသည်လျှောက်ပြီး သံရုံးနိုင်ငံရေး (သံရုံးရှေ.မှာ သွားအော်တာကို ပြောတာပါ) လုပ်တယ် ခေတ်ပြိုင်ဖေါက်သည်ကြီးပေါ့။ ထူးထူးဟန်ပုံက ၈၈ တုန်းက Time magazine မှာနဲ.တူတယ် လူအုပ်လိုက်ကြီးဆန္ဒပြနေတဲ့ ပုံကိုရိုက်ထားတာ သူ.မျက်နှာက ထင်ထင်ရှားရှားကြီး ပါသွားတယ်။ ဒါကြောင့်ပြောတာထင်တယ် သူ.ကိုသူပြောတာကိုး (ကျနော်က အရမ်းနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတာ)။
ပြောချင်တာကတော့ ထူးထူးဟန်ဟာ ဘာထောက်လှမ်းရေးမှ မလုပ်ခဲ့ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဖြစ်ဖို.လဲ အရည်အချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်ကျိုးအတွက် သတင်းရောင်းစားတဲ့ သူတော့ ဖြစ်ကေါင်းဖြစ်ခဲ့မယ်။ အခုကိစ္စကလဲ သူကိုယ်သူနာမည်ကြီးအောင် လုပ်တာသက်သက်ပါ။ သူတို.ကို ဟိုငယ်ငယ်လေးထဲက မျက်စေ့ရှေ.အောက်မှာ ကြီးလာတာကို တွေ.လာခဲ့တာပါ။ စစ်တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့တယ်တို. ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲ ဟေးလားဝါးလားနဲ. မူးယစ်ဆေးဝါးလေးသုံး အုပ်စုဖွဲ.ပြီး ပြသနာရှာ ရန်ဖြစ်တာကိုတော့ တွေ.ခဲ့ပါတယ်။
ကိုအောင်ဇော်နဲ. အဖွဲ.သားများရောစာဖတ်သူတွေရော ကျုနော် comment ကိုဖတ်ပြီးရင် သူ.ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုတာကို သိပါလိမ့်မယ်။ ထူးထူးဟန်တကယ်လုပ်ခဲ့တာပဲ ဆိုပြီးယုံကြည်နေသူများလဲ အမှန်သိနိုင်အောင်ပါ။ အခုသူလုပ်တဲ့ အလိမ်အညာက ပေါ်သွားရင် အာဏာရှင်တွေ တကယ်လုပ်နေတာတွေက မှေးမှိန်သွားပြီး နိုင်ငံတကကာက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံတွေကို အထင်သေးအမြင်သေး ဖြစ်သွားဖို.က သေချာနေပါတယ်။ အဲဒီတော့ အမှန်တရားပေါ်အောင် သတင်းသမားတွေကိုရော စာဖတ်သူတွေကိုပါ ဘယ်သူက ဘာလဲဆိုတာ သေချာသိအောင်လို. ရေးလိုက်တာပါ။
ဦးတင်မောင်ထူး (CFB မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ) ။ ။ “မြန်မာပြည်မှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေက တကယ်ရှိနေတာ။ အခုလိုမျိုး ဇာတ်လမ်းတွေ ထွင်ပြောလို့ ဒါတွေဟာ မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ တနေ့ သိတဲ့အချိန်မှာ တကယ်ဖြစ်ရပ်တွေအပေါ် ဖုံးကွယ်သွားပြီး စစ်အစိုးရကို အထောက်အကူ သွားဖြစ်နိုင်တယ်”။
“အများကြီး ထိခိုက်မှုရှိနိုင်တာပေါ့။ ကျနော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ ဟာတွေက ဘာမှ လိမ်ညာပြောဆိုခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ သူ ထ,လုပ်လိုက်တော့မှ ကျနော်တို့ပြောတဲ့ အရာတွေက မှန်ပေမယ့် အမှားတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အချက်ပေါ့။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းစေနိုင်တယ်။ လှုပ်ရှားမှုကို အများကြီး ထိခိုက်နိုင်တယ်”
ကိုဇေယျာဦး။ ။“ကျနော် အကဲခတ်မိသလောက်ကတော့ သူ့စကားက အမျိုးမျိုးပြောနေတော့ မယုံရဘူး။ နိုင်ငံရေးမှာလည်း ဟီးရိုးဖြစ်ချင်တာတွေ အများကြီးပဲ။ ဟုတ်တာရော၊ မဟုတ်တာရော ပါးစပ်က ပြောနေတာ။ သူနာမည်ကြီးရင် ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်၊ မကောင်းတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်မှာပါပဲ”
အမည်မဖော်ဝံ့သူ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား သူရဲကောင်းတစ်ဦး ။ ။ ထူးထူးဟန် ၂၀၀၃ ခုမှာ ခြေခြင်းခတ်ပြီး လက်မှတ်ကောက် ကမ်ပိန်း လုပ်ချိန်မှာ ဒီမို အရေးနှင့် သြ စီမြန် မာအဖွဲ့ တွေက အဲဒီကောင်ကို အားမပေးနဲ့ဒီကောင်က ထောက်လှမ်းရေး၊ ဘန်ေ ကာက်မှာ ခြေချင်း လိမ်ပြီး အတိုက်ခံ အဖွဲ့ တွေကို ဒုက္ခပေးတဲ့လူ။ ဒီလူက ခုမှ နိုင်ငံရေး ကန်ပိန်း ဆိုပြီး လျောက် လုပ်နေတာ။ တချို့ ဆရာကြီးများက သူ့ ရဲ့ ကန်ပိန်းကို စတိန့် မန့်တွေပါ ထုတ်ပြီး လုံးဝ မထောက်ခံကြောင်း ထူး ထူးဟန်သည် မြန်မာ ထောက်လှ မ်းဖြစ်ကြောင်း စစ်အစိုးရ ဖက်လြူ ဖစ်ကြောင်း ဆိုပြီး စာတွေ ဘာတွေ ထုတ်ပြီး သူ့ ရဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ရပ်များကို သြစတေး လျမြန်မာ အဖွဲ့ များ လုံးဝ မထောက်ခံရန် ဆိုပြီး လုပ်လိုက်ြ ကတာ။ ခုသူက သူ့ ကိုယ်သူ ထောက်လှန်းေ ရးဟောင်းပါလို့ လဲ ၀န်ခံရော ခင်ဗျားတို့ သြစီမြ န်မာအဖွဲ့ တွေ ကမ ဟုတ်ပါဖူး မယုံပါဖူး ငြင်းပြန်ရော ဘာတွေ လဲဗျ။ အရင်က သူ့ ကိုထောက်လှန်းေ ရးလို့ စွပ်စွဲပြီး ခုသူ ကဟုတ်ပါတယ် ပြောတော့ခင် ဗျားတို့ က မယုံကြ ပန်ဖူး။
ကိုတင်ကို ။ ။ “ကျနော်ထင်တယ်။ နောက်ပိုင်း ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ နောက်ပိုင်းလာတဲ့ လူတွေကို စိစစ်မှုတွေ ပိုလုပ်လာမယ်။ အရေအတွက် လျှော့ချတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ သူ လီဆယ်ပြီး ပြောတယ်ဆိုရင်လည်း သြစတြေးလျအစိုးရက ဥပဒေအရ အရေးယူပါလိမ့်မယ်”
ဒေါက်တာမြင့်ချို (ယခင်ခု ဒုက္ခသည်၊ အော်ဇီ) ။ ။ "ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ထူးထူးဟန်ဟာ စစ်ရာဇဝတ်ကောင် တယောက် ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိပါဘူး" “သူ လူ ၁၀၀ လောက် ဗမာပြည်မှာ သတ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စက ယုံဖို့ အရမ်းခက်တယ်”
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှ အတိုက်အခံတဦး ။ ။ "အခု CoI လုပ်နေချိန်မှာ ဒီသတင်းထွက်ပေါ်လာတာ ကျနော်တို့အတွက် မကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းအမှားတွေ ပေးတယ်လို့ နိုင်ငံတကာက ထင်သွားမှာ စိုးရိမ်ရပါတယ်"
ကိုတိတ်နိုင် ။ ။ “အခုလို သူပြောတဲ့ အချက်တွေက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ထောင်ထဲမှာ ကျနော်နဲ့ တွေ့တုန်းက သူ့ အသက်က ၁၆ နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်”
အမည်မဖော်ဝံ့သူ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား သူရဲကောင်းတစ်ဦး ။ ။ (ယခု ဒုက္ခသည်၊ အော်ဇီ)။ ။ ထူးထူးဟန်ရေ မင်းချိန်းကြိုးကြီးနဲ့ သြဇီတပတ် ပတ်တုန်းကလည်း ငါတို့မှာ ဘာမသိ ညာမသိနဲ့ မင်းနောက်လောက်ပြီး
အားပေးခဲ့ရတယ်။ ခုလုပ်ပြန်ုပြီ။ ဒီမိုကရေစီအရေးကိုတော့ ထိခိုက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ မင်းနဲ့မည်ငါတို့ အားလုံးသိပြီးသားပါပဲ။ တိုက်စရာနောက်တနည်း ထပ်စဉ်းစား သူငယ်ချင်း။
ကြာကူလီစိုင်းသိန်းဝင်း။ ။ စစ်တက္ကသို လ်တွေက ပေးတဲ့ အကောင်းဆုံး ဗိုလ်လောင်းဆုက ငွေဒါးပါ။ ရွှေဒါး မဟုတ်ပါဘူး။ ၈၇ မှာေ ကျာင်းဆင်းရင် စတသ အပတ်စဉ်-၂၈ ပေါ့။ ခုဆို အနည်းဆုံး အသက် ၄၇ နှစ်တန်းေ တွဖြစ်နေပြီ။ နောက် တစ်ချက်က ထောက်လှ မ်းရေးကို ဒုဗိုလ်အဆင့်နဲ့ ရောက်တယ် ဆိုတာလည်း တမျိုးပဲ။ ကျောင်းဆင်း ဆင်းချင်း ထောက်လှမ်းရေး တပ်ကို ဘယ်သူမှ မရောက်ပါဘူး။ ဗထူးမှာ combat သင်တန်း အရင် တက်ရတယ်။ အဲဒီက ထူးခွှန်မှ ရေကြည်အိုင်မှာ counter သင်တန်း တက်ခွင့် ရပြီး ထောက်လှမ်းေ ရးရောက်ပါတယ်။ ဒုဗိုလ်ကနေ ဗိုလ်ဖြစ်ဖို့ တစ်နှစ်သာ ကြာတဲ့အတွက် အဲဒီ တိုက်ခိုက်ေ ရးသင်တန်း၊ တန်ပြန်ေ ထာက်လှမ်းရေးသ င်တန်းနှ စ်ခုလုံး တက်ပြီးချိန်မှာ ဗိုလ်အဆ င့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဆိုတော့.. ထောက်လှမ်းရေးမှာ ဒုဗိုလ်အဆင့်နဲ့ တာဝန်ထမ်းေ ဆာင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ နောက်ပြီး ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ရန် သူတွေကို အရာရှိတွေ ကိုယ်တိုင် သတ်စရာ မလိုပါဘူး။ အခြားအ ဆင့်ရဲဘော်ေ တွရှိပါတယ်။ အဲဒီ အခြားအ ဆင့်ရဲဘော်တွေ ထွက်ြေ ပးလို့ ပြန်ဖမ်း မိတဲ့ အခါမျိုးသာ အရာရှိက ပစ်သ တ်ပါတယ်
အတိုက်အခံအချင်းချင်း ဟားတိုက် လှောင်ပြောင်ကြ
ကိုဗျူးဗျူးလန်က ဦးရုက္ခစိုးပြောသည်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ “ကျနော်က စစ်တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက ရွှေဓားဆု ရခဲ့တဲ့သူဗျ။ ကျနော့်ကိုယ် ကျနော်မို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး၊ ကျနော် တော်တော် တော်ခဲ့တဲ့သူပါ” ဟု ပြောလိုက်သည်။
ကြွက်စုတ်။ ။ အဲဒီ ရွှေဓားကြီးကော … ဘယ်မှာလဲ။
ဗျူးလန်။ ။ သူငယ်ချင်းတယောက် တောင်ပြုံးပွဲမှာ နတ်ကရင် သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။
ဖိုးရှုပ်။ ။ မှားပါတယ်။ အေးလေ … ထားပါတော့ … လူ ၁၀၀ လောက်တောင် သတ်ခဲ့တာဆိုတော့ တော်တော် စွန့်စားရမှာပဲနော်။
ဗျူးလန်။ ။ စွန့်စားရတာတော့ ပြောမနေနဲ့ … ။ ကျနော်ကလည်း အဲဒီလို စွန့်စားရတာ အရမ်းဝါသနာ ပါတာလေ။ ကျနော် ငယ်ငယ်ကဆို စုံထောက်စာအုပ်တွေပဲ ဖတ်တာဗျ။ ဦးစံရှားနဲ့ ဦးဒိန်းဒေါင်ဆို ကျနော့် အသည်းစွဲပဲ။ နည်းနည်း ကြီးလာတော့ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်တွေ အတွဲလိုက် ဖတ်တယ်။ အဲဒီလိုလူက စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှာ ဝင်လုပ်ပြီး ချိုကုပ်ဖင်တွန့်ရဲ့ လက်ရုံး တဆူ ဖြစ်လာတာတော့ မဆန်းဘူးပေါ့ဗျာ ဟဲဟဲ။
ကြွက်စုတ်။ ။ အသတ်အပုတ်နဲ့ … ကိုယ်ခံပညာလည်း တော်တော် ကောင်းမယ့်ပုံပဲ။
ဗျူးလန်။ ။ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ … ။ ကောင်းဆို ကျနော်က သိုင်းဝတ္ထုတွေဆို တအုပ်မှ အလွတ်ပေးတာ မဟုတ်ဘူးလေ။
ရုက္ခစိုး။ ။ အင်း … ကြွက်စုတ်ရေ … မင်းမေးခွန်းက မှားနေတာ။ ငါမေးပြမယ်။ ကိုဗျူးဗျူးလန်က လူတွေကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်တာဆိုတော့ ဘာ သေနတ်သုံးလဲ။
ဗျူးလန်။ ။ သနပ်ကတော့ အစုံပါပဲ။ အမေကလည်း သနပ်စုံလုပ်တယ်လေ။ သံပုရာသီး သနပ်ကတော့ ဒန်ပေါက်နဲ့ အလိုက်ဆုံးပဲဗျို့။
“သူ့အင်တာဗျူးကလည်း ... ဗိုက်တောင် ဆာလာပြီ” ဟု ဖိုးရှုပ်က စိတ်ထဲမှ ပြောလိုက်သည်။ ကြွက်စုတ်က ဖိုးရှုပ်အနားသို့ ကပ်၍ “ကြည့်လဲ လုပ်ဦးနော် ဖိုးရှုပ် … သူ့ကြည့်ရတာ နည်းနည်း ရွေ့နေလား မသိဘူး”
ဗျူးလန်။ ။ ဟိုလူ … ကျနော့်ကို ရွေ့နေတယ်လို့ ပြောတာလား။ ခင်ဗျားပြောတာ မှန်တယ်ဗျ။ ကျနော်က ရပ်နေရတာ မကြိုက်ဘူးလေ … ရွေ့နေရတာကို သဘောကျတယ်။ အရွေ့ရှိမှ အလုပ်သဘောဆောင်တယ်လေ။ လူတွေက ကျနော့်ကို မေ့နေကြတာဆိုတော့ ...။
ကြွက်စုတ်။ ။ မေ့တာမဟုတ်ဘူး … သိကိုမသိတာ။
ဗျူးလန်။ ။ အင်းလေ အတူတူပါပဲ။ အဲဒီလို မသိတာဆိုတော့ သိသွားအောင် ရွေ့ပြလိုက်ရတာပေါ့။
ဦးရုက္ခစိုးက “မှားပါတယ်” ဟု စိတ်ထဲက ရေရွတ်ရင်း “ကျနော်မေးတာက ပစ်တဲ့သေနတ်လေ” ဟု အမှတ်မရှိ ထပ်မေးပြန်သည်။
ဗျူးလန်။ ။ သြော် အဲဒါလား။ မသိဘူးလေ … ကျနော်က သြဇီမှာ အနေကြာလာတော့ မြန်မာပြည်က ကြက်လျှာစွန်း ဒန်ပေါက်ကို လွမ်းနေတာနဲ့ ရောသွားတာ။
ကြွက်စုတ်။ ။ ထားပါတော့ဗျာ … ဒီလောက် လူသတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျူးလွန်ကြောင်း ထုတ်ပြောတာ တော်တော် ဆန်းတာပဲ။ တခြားကမ္ဘာကျော် လူသတ်သမားကြီးတွေတောင် ဘယ်သူမှ ဒီလိုမျိုး ဝန်ခံတာ မကြားဖူးဘူး။
ဗျူးလန်။ ။ အဲဒီ မေးခွန်းကို ကျနော်စောင့်နေတာပဲ။ ဒီလိုဗျ … ကျနော်က ချိုကုပ်ဒူးကြီးနဲ့ အဖွဲ့ကို နိုင်ငံတကာ စစ်ခုံရုံး အမြန်ဆုံးတင်ချင်တာလေ။ သူတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို ဖြောင့်ချက်ပေးဖို့အတွက် ကျနော်အရင် အစစ်ခံဖို့ လိုတယ် မဟုတ်လား။ ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် အရင်ဆုံး စစ်ခုံရုံးအတင်ခံမယ်။ ပြီးရင် အားလုံး ဖွင့်ပြောလိုက်မယ်။ ဒါဆို ပွဲပြီးပြီ။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ချိုကုပ်ဒူးကြီးနဲ့ အဖွဲ့တော့ စစ်ခုံရုံး ရောက်မရောက် မသိဘူး ...၊ လောလောဆယ်တော့ ခင်ဗျား နာမည် တော်တော်ကြီးနေပြီ။
ဗျူးလန်။ ။ အဲဒါကြောင့် ခင်ဗျား ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ။ ဒီလို နာမည်ကြီးတဲ့လူတယောက်နဲ့ အင်တာဗျူးရဖို့ လွယ်တယ် ထင်လား။
ကြွက်စုတ်။ ။ ခင်ဗျားက တကယ်ပဲ ၁၀၀ လောက်ကို သတ်ခဲ့တာလားဗျာ။
ဗျူးလန်။ ။ တကယ်တော့ ကျနော်သတ်ခဲ့တာ ၁၀၀ တောင်မကဘူးဗျ။ ပြောရင် ကြွားရာကျမှာစိုးလို့။
ကြွက်စုတ်။ ။ AAPP က ပြောတော့ ခင်ဗျားက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးသေးတာဆို … ဘယ်အချိန်က စစ်ထောက်လှမ်းရေး ဖြစ်သွားတာလဲ။
ဗျူးလန်။ ။ အဲဒီအချိန်ကတည်းက ထောင်ထဲမှာ ထောက်လှမ်းရေး လုပ်နေပြီဗျ။ ဘယ်သူမှတောင် မရိပ်မိလိုက်ဘူး။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ဘယ်လို … ဘယ်လို … ထောင်ထဲမှာ ကတည်းက ထောက်လှမ်းရေး လုပ်နေပြီ ဟုတ်လား။
ဗျူးလန်။ ။ ဟုတ်တယ်လေ … အဲဒီတုန်းက ဝဲယားလို့ ကုတ်တာကို ထောင်မှူးကို အဝှာပြပါတယ်ဆိုပြီး ကျနော့်ကို ရိုက်တာနဲ့ ကျနော့် ခြေထောက်တဘက် နာသွားတယ်။ အဲဒီကနေ ထောက်ထောက်ပြီး လှမ်းရတော့တာပဲ။
ကြွက်စုတ်။ ။ ရှုပ်ကုန်ပြီ ဖိုးရှုပ်ရေ … ငါတော့ ရူးချင်လာပြီ။
ဗျူးလန်။ ။ မရှုပ်ပါနဲ့ဗျ … ကျနော်သေချာ ရှင်းပြမှာပေါ့။
ရုက္ခစိုး။ ။ အဲဒါဆို ရှင်းကွာ … ၁၀၀ ကျော်သတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းက ဘယ်လို သတ်ခဲ့တာလဲ။
ဗျူးလန်။ ။ ထောင်ထဲမှာတင် သတ်တာလေ။
ကိုဗျူးဗျူးလန် စကားကြောင့် အားလုံး အံ့သြသွားကြသည်။
ဗျူးလန်။ ။ အံ့သြသွားသလား … မအံ့သြပါနဲ့ဗျာ … ကျနော် တကယ်ကို သတ်ခဲ့တာပါ။ အကောင် ၁၀၀ ကျော်တယ်။ အားလုံးကို နံရံမှာကပ်ပြီး အသေသတ်ခဲ့တာ။ သွေးတွေ … သွေးတွေဆိုတာ မြင်မကောင်းဘူး။
ကြွက်စုတ်။ ။ အကောင် ၁၀၀ ကျော် ဟုတ်လား။
ဗျူးလန်။ ။ ဟုတ်တယ်လေ …။ ကြမ်းပိုးအကောင် ၁၀၀ ကျော်ကို နံရံမှာကပ်ပြီး အသေဖိသတ်ခဲ့တာ … ဘာရမလဲ။ ကျနော့်သွေးကို စုတ်တဲ့ကောင်တွေပေါ့။
ရုက္ခစိုး။ ။ မှားပြန်ပြီ … တခါ။
ထိုစဉ် ချင်းမိုင် စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံအတွင်းမှ ဆရာဝန်တဦးနှင့် သူနာပြု ၃ ဦး အပြေးထွက်လာကြသည်။
ဗျူးလန်။ ။ ဟာ … သတင်းထောက်တွေ လာကြပြန်ပြီ။ သူတို့မသိအောင် တိတ်တိတ်လေး ထွက်လာခါမှဗျာ။ အဲဒါပဲ ကျနော် နာမည် ဘယ်လောက် ကြီးနေလဲဆိုတာသာ ကြည့်တော့ ...။
ဖိုးရှုပ်။ ။ သတင်းထောက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး … ဆရာဝန်နဲ့ သူနာပြုတွေပါ။
ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုများ သူတို့အနားသို့ရောက်လာပြီး ထိုင်းဘာသာစကားနှင့် ပြောသည်ကို တိုက်ရိုက် ပြန်ဆိုပြပါမည်။
ဆရာဝန်။ ။ ဖမ်းထားပါ … ဖမ်းထားပါ။ သူ့ကို ဆေးရုံတင်ထားတာ … ဘယ်အချိန်က လွတ်သွားလဲ မသိလိုက်ဘူး။
သူနာပြု ၂ ဦးက သူ့အနားသို့ကပ်၍ လက်ကို ဖမ်းချုပ်လိုက်သည်။
ဗျူးလန်။ ။ ရပါတယ်ဗျာ … ကျနော့်လက်ကို ဆွဲမထားလည်း ဖြေမှာပါ။ ကျနော့်ကို တွေ့ချင်တဲ့သူတွေက အရမ်းများနေလို့ အချိန် ခွဲပေးနေရလို့ပါ။ ညနေကျရင်လည်း အိုဘားမားနဲ့ စကားပြောဖို့ ချိန်းထားသေးတယ်။ ဘန်ကီမွန်းကလည်း တွေ့ချင် တယ်တဲ့ … ။ အင်း … နာမည်ကြီးရတဲ့ ဒုက္ခ … နာမည်ကြီးရတဲ့ ဒုက္ခ။
ဆရာဝန်။ ။ မြန်မြန်လိုက်ခဲ့ပါ … ခင်ဗျား မိန်းမ စိတ်ပူနေပြီ။
ဗျူးလန်။ ။ မိန်းမက အရေးမကြီးပါဘူး။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ပေးဆပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒါတွေ လာမပြောနဲ့။ ချိုကုပ်ဒူးကြီးကို စစ်ခုံရုံးတင်ပြီးရင် ကျနော် ကမ္ဘာကျော်ပြီ …။ အဲဒီအချိန်ကျမှ အင်တာဗျူးလိုချင်တယ် ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ တန်းစီရမှာနော်။ ဆောရီးဗျာ … ကျနော် လူတိုင်းနဲ့ စကားမပြောနိုင်တာ မာနကြီးတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ ...။ ကျနော့်ကို လူတိုင်းက သိပေမယ့် ကျနော်ကတော့ လူတိုင်းကို ဘယ်သိနိုင်ပါ့မလဲ ...။
ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုများက ကိုဗျူးဗျူးလန်ကို ဆွဲခေါ်သွားကြသည်။ ပါးစပ်မှ ဆီမန်းမန်းသကဲ့သို့ တတွတ်တွတ်ရွတ်ရင်း လိုက်ပါသွားသည်ကို ကြည့်ရင်း ကျန်ခဲ့သူ သုံးဦးမှာ နဖူးကို လက်နှင့်ရိုက်၍ “မှားပြန်ပြီ” ဟု ပြိုင်တူ ရေရွတ်မိလိုက်ကြ လေတော့သတည်း။ ။
အခြေအနေကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရရင်တော့ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများထဲတွင် ကွဲလွဲမှုပေါင်းများစွာဖြစ်နေကြပြီး စိတ်မမှန်သူများစွာရှိနေတာ အသေအချာပါပဲဗျာ....။